Sony Ear Duo, ụlọ ọrụ ahụ na-ekwusi ike. Ekweisi dakọtara na Siri na Google nnyemaaka | Akụkọ akụrụngwa
Jordi Gimenez | | Ngwa, Foto na ụda
E wezụga ọhụrụ Xperia XZ2 ụdị Emebere igwe ekwe ntị ọhụrụ nke Sony Ear Duo nke ọma n'isi ụtụtụ a. Oge a ihe ọhụụ bụ na ọ bụ smart headset na-enye ohere maka oge mbụ nwee ndị enyemaka Google na Apple na ngwaọrụ.
N'afọ gara aga, Xperia Ear malitere, afọ a bụ Sony Ear Duo.
Sony enweghị onye enyemaka ugbu a na nke a na-eme ka ekweisi ọhụrụ kwekọọ na ndị enyemaka a. Companylọ ọrụ ahụ n’onwe ya kwuru ya n’oge ogbako ahụ mana ọ bụ eziokwu na ya esighi mgbagwoju anya na ya ma emesia mgbe anyị jụrụ ya ozugbo na tebụl ha amaghị etu esi akọwa etu ọ ga-esi arụ ọrụ. O doro anya na anyị ga-enwe ike ịjụ, gụọ ozi ma zaa oku site na ndị enyemaka, mana amaghi nke oma otu esi emekorita ha.
Tụnyere na foto nke ụdị abụọ ahụ, 2017 na 2018:
Karịa mputa, ihe ka mma n’ime ha bụ ịrụ ụka adịghị ya na teknụzụ dị n’ime. Sony na-aga n'ụzọ ya adighi eleba anya na isi mgbanwe mgbanwe, ihe anyị na-ahụkwa na ngwaọrụ mkpanaka nke Xperia gosipụtara, ọ bụ ezie na afọ a ọ dị ka ha "nwere ihe ize ndụ" ntakịrị.
The Sony Ear Duo, na-etinye ihe mmetụta dị nso, accelerometer, gyroscope, compass na barometer, nke na-enye anyị ohere ịmara n'oge niile ọ bụrụ na anyị nwere ma ọ bụ na anyị anọghị, na mgbakwunye na ịhapụ anyị ịchọpụta mmegharị nke isi anyị ịsị " Ee "ma ọ bụ" Emela ". N'aka nke ọzọ ha tinye a teknụzụ ha na-akpọ Open Ear, nke ga-enye anyị ọkwa nkwu mgbe anyị na-ege egwu.
Igwe ntị ntị ziri ezi bụ nke nwere ọtụtụ teknụzụ a ma na-enye anyị ohere, ekele maka ogwe aka, iji soro ya mekọrịta ma mee mgbanwe na ya. Ha nwere IPX2 asambodo, nke na-eme ka ha na-eguzogide ọgwụ splas, ọsụsọ, wdg, ma anyị enweghị ike imikpu ha.
Igweisi Sony ndị a nwere ike ịdị maka ịzụta n'oge ọzọ nwere ike, ma ọ nweghị ụbọchị ọrụ ma ọ bụ nkwenye sitere na ụlọ ọrụ ahụ. Maka ọnụahịa ahụ, a na-ekwu na ha nwere ike ịbụ ihe dị ka $ 280N'ọnọdụ ọ bụla, ọ ga-adị mkpa iji nlezianya na-agbaso ozi ahụ ewepụtara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Sony Ear Duo, ụlọ ọrụ ahụ na-ekwusi ike. Siri na Google nnyemaaka ekweisi